Markab baddu liqday afar qarni ka hor oo raadkiisa la heley
Koox quusayaal ah oo gunta hoose ee badda ka baara maraakiibta quustay ayaa heley mid ka mid ah agabkii saarnaa markab quusay sanadkii 1606-dii, kaasi oo laga lahaa dalka Spain.
Markabkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray San Francisco, wuxuuna u kala gooshayay dalka Filibiin iyo Mexico ka hor intii uusan degin dabaylo badda ka kacay awgood, waxaana la sheegay in uu waday badeeco qiimaheedu gaarayo malaayiin doolar.
Halka uu ku quusay ayaa horey loo waayay, balse sheeygan la heley oo ah dhagixii laga ridayay gantaalka ku rakibnaa markabka ayaa la sheegay in uu yahay raad cusub oo horseeda kara in la helo haraadiga markabka.
Dhagaxan ayaa waxa soo heley nin u dhashay dalka Australia oo lagu magacaabo Ian McCann, wuxuuna kasoo heley gunta hoose ee badda isaga oo qeyb ka ahaa koox quusayaal ah oo uu hoggaaminayo ninka lagu magacaabo Dr Jun Kimura oo ka tirsan jaamacadda Tokai ee dalka Japan.
“Markii aan dhaxaga soo saarnay oo aan la tashanay dad qubaro ah ayaan ogaanay in uu qeyb ka ahaa markabkii quusay ee San Fransisco” ayuu yiri Dr Jun.
Mashruucan oo ay maalgelisay dowladda Japan ayaa ah kii ugu horeeyay oo lagu baadigoobayo markabkan quusay oo la aaminsanyahay in uu wadday alaabo aad qaali u ah.
Raadka hadda muuqda waa mid rajo cusub keenay, waxaana sahanka labaad la dirayaa sanadka soo socda horaantiisii.
Haddii la helo markabkan waxa rajo yeelanaya maraakiib badan oo badda ku quusay, waxaana la rumeysanyahay in hadda gunteeda ay taalo hanti aad u badan oo maraakiib quustay saarnayd.
Markabkan ayaa waxa uu taariikh ku lahaa adduunka, maadaamaa xiligii uu quusayay uu saarnaa barasaabkii Filibiin ee gumeysigii Spain Don Rodrigo de Vivero Velasco.
Barasaabka oo ka badbaaday masiibada ayaa buug uu ka qoray waxa uu ku faahfaahiyay wixii dhacay.
Boqolaal qof oo kale ayaa burburka markabka ka badbaaday, kuwaas oo markii dambe si nabad ah ku gaaray dalka Mexico.
Waxaa gacan weyn gurmadka ka geystay boqorkii Japan, kaas oo markab markaas la dhisay sii saaray dadka, kuna daray wakiilo isaga ka socda, kuwaas oo la sheegay in ay noqdeen dadkii ugu horeeyay oo reer Japan ah oo ka talaabay badda Pacific inta la ogyahay.
Previous: Somaliland: Xayiraadda Baraha Bulshada
Next: Doorashada Somaliland: Guddida oo ku dhawaaqday in la xidhay goobihii codbixinta